Repoblikan'i Belarus - Gazety "Rafitra ovy"
Tena Label Repoblika Belarosiana
Label: Repoblika Belarosiana
Aretina ovy 30 eo ho eo no hita tany Belarosia, izay tsy mbola nisy teto amin'ny repoblika teo aloha
Vadim Makhanko, Tale jeneralin'ny RUE "Ivom-pamokarana siantifika sy famokarana ao amin'ny Akademia Nasionalin'ny Siansa ao Belarosia ho an'ny Potato sy Horticulture", dia niresaka momba ny fahatsinjovan'ny ovy mitombo ao amin'ny repoblika nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ...
Fetiben'ny ovy belarosiana hotontosaina any amin'ny faritra Novosibirsk
Amin'ny 26 septambra, ao amin'ny tanànan'ny Moshkovo, faritra Novosibirsk, hisy festival festival ovy "Svyata Bulba". Ny hetsika Novosibirsk Center of Belarusian Culture GAUK ...
Tsangambato ovy naseho tao Belarus
Nisy tsangambato ovy naseho tao amin'ny tanànan'ny fambolena Deshchenka, faritra Minsk. Ny tsangambato dia harona fantson-drano, atsangana eo ambonin'ny vato lehibe misy ...
Miresaka momba ny fividianana ovy avy any Belarus i Russia
I Russia dia mifanakalo hevitra amin'i Belarus momba ny fividianana ovy am-polony taonina fanampiny mba hampiorenana ny vidiny. Notaterin'ny RIA Novosti ...
Fambolena ovy: fomba Belarusian
Amin'ity fizarana ity dia nizara vaovao foana izahay momba ny fivoaran'ny ovy any amin'ny faritra samihafa ao Russia. Fa tamin'ny taona 2020 ...
Belarus dia mamaritra ny làlan'ny fampandrosoana ny asa fambolena mandritra ny dimy taona
Belarus dia nanaiky ny fandaharam-panjakana "Agrarian Business" ho an'ny 2021-2025. Nokasaina hanome 284 miliara mahery hamatsiana ara-bola ny asa atao amin'ity fandaharam-panjakana ...
Ny mpividy ny ovy belarosiana tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2020 dia Okraina, legioma - Russia
Raha ny filazan'ny minisiteran'ny Fambolena sy ny sakafo any amin'ny Repoblikan'i Belarus, ny volana janoary-septambra 2020, nanondrana vokatra sy vokatra fambolena ireo fikambanana ...
Namintina ny valin'ny fanadiovana voalohany i Belarus
Iza no mamboly ovy ary ohatrinona any Belarus? Mampahafantatra i BelTA fa ny voly ovy lehibe any Belarus dia alaina amin'ny toeram-pambolena tsy miankina. Akaiky ...
Sergey Lisovsky: "Ao amin'ny YUGAGRO dia afaka mijery ny ho avy ianao, jereo ny teknolojia farany ary safidio izay tena ilainao."
Filohan'ny komity Duma an'ny raharaha momba ny fambolena: "YUGAGRO dia sehatra iray manan-danja amin'ny famintinana ireo valim-pifidianana tamin'ny fotoam-pambolena"